दिशामा रगत देखियो, हेलचेक्राई नगरौँ ! क्यान्सरसम्म हुनसक्छ ! - VOICE OF NEPAL
२७ जेष्ठ २०७६, सोमबार ११:५१ 230 ??? ???????
दिशाबाट त्यसरी जाने आलो रगत रगतमासी, पायल्स वा मलद्धारमा घाउ भएर मात्रै नआएको पनि हुनसक्छ । त्यो रगत तपाईको आन्द्रामा घाउभएर आएको हुनसक्छ । आन्द्राको घाउ कोलोन क्यान्सर ठूलो आन्द्राको क्यान्सर पनि हुनसक्छ ।